Xildhibaan katirsan Jubbaland oo beeniyay in Kismaayo ay amni darro ka soo cusboonaatay – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan Jubbaland oo beeniyay in Kismaayo ay amni darro ka soo cusboonaatay
Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale oo katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka dowlad gobaleedka Jubbaland oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa ka hadlay dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacay xaafado katirsan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose.
Mr Buraale ayaa sheegay in kismaayo ay tahay magaalada ugu nabad-galyada wanaagsan Soomaaliya islamarkaana ay ka shaqeeyaan Ciidamo iyo bulsho isku aragti ka ah sugidda amniga guud ahaan degaanada Maamulka Jubbaland, gaar ahaan Caasimadda KMG ah ee Kismaayo.
“Alle ha u naxariisto habeenno ka hor Kismaayo waxaa lagu dilay Nabadoon Cabduqaadir Ibraahim, gacan ka xaq daran ayaa dishay waana la soo qaban doonaa” ayuu yiri Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale. “Amniga Kismaayo waa mid sugan oo la’ isku haleyn karo waana magaalada ugu nabad galyada wanaagsan Soomaaliya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Bashiir Faaqdi Buraale oo katirsan Golaha Wakiilada Jubbaland.
Dhinaca kale Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale, oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa soo hadal qaaday ololaha doorashada ee ka socda magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose iyo eedeyn maamulka Jubbaland loo jeediyay, taas oo katimid qaar kamid ah Musharaxiinta doorashada Jubbaland ee sanadkaan 2019.
“Musharaxiinta si diiran ayaa loogu soo dhoweeyay Kismaayo waxaana la siiyay amni laakiin qaarkood waxay baahiyeen warar been ah waana mid dhaawaceysa nabad-galyada Jubbaland” ayuu yiri Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale.
Mar aan weydiinay Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale su’aal aheyd doorasho xor iy xalaal ah maka dhici kartaa Jubbaland, markaa eegto sida ay wax u socdaan, ayaa waxa uu ku jawaabay. “Haa waa ka dhici kartaa waana ka dhici doontaa, qof kasta aragti iyo barnaamijyo ayey ku tartami doonaan musharaxiinta” ayuu yiri Xildhibaan Buraale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya